Ubuntu 17.04 inosvika svondo rino neUniity 7 | Linux Vakapindwa muropa
Zvinoenderana nekambani yeUbuntu yekuvandudza karenda, svondo rino Ubuntu 17.04 vhezheni ichaburitswa kana inozivikanwawo seUbuntu Zesty Zapus. Iyi vhezheni ndeye 26th vhezheni yeUbuntu, vhezheni icharamba iine Unity 7 sedesktop rayo hombe pamwe neiyo yepamutemo Ubuntu Gnome flavour.
Iyo vhezheni itsva ichaburitswa muna Kubvumbi 13 sekugadzwa nekendendari uye pakati pezvimwe zvinhu zvitsva, iyo vhezheni ichave ne kernel 4.10, X.org 1.19 uye MESA 17.0.3.
Kubatana 7 ichave iri desktop yakasarudzika yeiyi vhezheni uye ichave iine zvimwe zvitsva, asi izvi zvinogumira pakururamisa bug uye kusagadzikana matambudziko akawanikwa mukati memwedzi yekupedzisira. Kune rimwe divi, Gnome, kunyangwe isiri iyo default desktop, ichave iine akawanda maficha maficha, kusanganisira yazvino vhezheni yedesktop iyi, Gnome 3.24.
Kunyangwe ichi chiziviso, Unity 8 ichiri mune yepamutemo Ubuntu 17.04 repositori
Iwo mapurogiramu akasiyana anogadzira iyo Gnome desktop ichave iri mukati meUbuntu 17.04 repositories asi kwete mune yayo yazvino vhezheni, ndiko kuti, mushanduro 3.24, asi mune dzakapfuura shanduro, zvinoenderana nesarudzo yeUbuntu neUbuntu Gnome timu. A) Hongu, Nautilus, Gnome's mukurumbira faira maneja, ichave mune vhezheni 3.20.
Zvinoenderana nekuziviswa kwesvondo rapfuura, ichave iri gore rinouya, 2018 nekuburitswa kweinotevera LTS vhezheni apo Gnome ichave iri default desktop, ukuwo Unity 7 ichave iri default desktop. Inokwezvawo kutarisisa kuiswa kweshanduro nyowani dzeUnited 8, desktop isina kugadzikana iyo kunyangwe isinga svike paUbuntu, ichiri muzvinyorwa zvepamutemo zvekuparadzira.
Ubuntu 17.04 ichave yakagadzikana uye yekupedzisira vhezheni, asi nekuda kwekuziviswa kwesvondo rapfuura, iyi yemberi vhezheni ichiri shanduro yekuvandudza, vhezheni yatinogona kuona kufambira mberi kweiyo synchrony nekushanda pakati peGnome-Shell neBuntu iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu 17.04 iri kuuya svondo rino neUniity 7
Gondo reNerja akadaro
Parizvino rakanakisa uye rakazara zvizere desktop reLinux ndiPlasma 5 pasina kupokana, kupfuura zvido zvemunhu, hongu. Gnome Shell mune yazvino mamiriro ebudiriro iri mairi, ichidya yakawanda yegondohwe ndangariro pakuvamba kupfuura Windows 10 haina poindi yekuenzanisa, tisingataure nezvakashata kushata kweNautilus, iyo padhuze neDolphin inoita kunge hove diki inofa.
Pindura kuna Aguilar de Nerja
Rodrigo Martínez (D z K n Z z) akadaro
Usatungamirirwe nezvinoonekwa. Plasma zvakare iri yekushandisa-inoyamwa, kunyangwe iwe ungasazviona nekuda kweiyo 4 kana kupfuura GB ye RAM yaunofanirwa kunge uine.
Pindura Rodrigo Martínez (D r K n Z z)
Rodrigo Martínez (D z K n Z z)
Berry, iwe unonyatso kuudzwa zvisizvo. Plasma 5 pakutanga inoshandisa 300 megabytes kana zvishoma zvichienderana nekugadziriswa. Gnome Shell haina kudya isingasviki 1.2 GB pakutanga, kune izvi zviri pachena tinofanirwa kuwedzera bhurawuza raunoshandisa nezvimwe.